Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Masar iyo Ethiopia
Wasiirka arrimaha dibedda Masar ayaa ku booriyey Golaha Ammaanka QM inuu ogolaado qaraar awood u siinaya caalamka inay xalliyaan khilaafka dalkiisa kala dhaxeeya Ethiopia ee salka ku haya biyo-xireenka ay Addis-Ababa ka sameyneyso webiga Nile.
Sameh Shoukry ayaa sheegay in biyo-xireenkaas uu halis ku yahay nolosha 150 milyan oo qof oo u dhashay dalalka Masar iyo Sudan.
Wasiirka ayaa sheegay in qaraarkaas uu waafaqayo natiijada kulan madaxeed uu Midowga Afrika arrintan ka yeeshay Jimcihii, kaasi oo hogaamiyayaasha Masar, Sudan iyo Ethiopia ay isku raaceen inay kusoo laabtaan wada-hadallada.
“Qaraarka ujeedkiisu maaha inuu ka hortago wada-xaajoodka balse waa in lagu muujiyo in beesha caalamka ay daneyneyso in heshiis laga gaaro biyo xireenka ayna fahamto halista go’aan hal dhinac ah oo arrintan laga qaato,” ayuu yiri Sameh Shoukry.
Sameh Shoukry ayaa sheegay in qaraarka uu soo jeedinayo in saddexda dal ee Masar, Sudan iyo Itoobiya ay heshiis ku gaaraan laba toddobaad gudahood.
Saacado kadib heshiiskii Midowga Afrika uu mas’uulka ka ahaa ee Jimcihii, ayaa xafiiska ra’iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu bayaan ku sheegay inay laba toddobaad kadib billaabi doonaan buuxinta biyo-xireenka. Arrintaas ayuu xafiisku sheegay inay waafaqsan tahay heshiiska.
Masar iyo Sudan ayaa doonaya in Ethiopia aysan buuxin biyo-xireenka bisha soo socota, sida ay qorsheyneyso, illaa dalalka ay heshiis ka gaaraan.